आसिफ सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलर को-को भए? :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
आसिफ सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलर को-को भए?
प्रधानमन्त्री कप टी-२० राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबले जित्यो।
बुधबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा भएको फाइनल भिडन्तमा नेपाल पुलिस क्लबलाई २१ रनले पराजित गर्दै एपिएफ च्याम्पियन बनेको हो।
उपाधिसँगै एपिएफले ५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार जितेको छ। उपविजेता बनेको पुलिसले ३ लाखमै चित्त बुझायो।
प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी एपिएफका विकेटकिपर ब्याट्सम्यान आसिफ शेख घोषित भए। उनले प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन जोड्ने क्रममा ६ इनिङ्ग्समा २२७ रन जोडे। जसमा २ अर्धशतक सामेल छन्। उनले खेलमा ८ क्याच लिँदा ३ स्टमपिन गरे।
यस्तै नेपाल पुलिस क्लबका कुशल भुर्तेल उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान घोषित भए। उनले १८२ रन जोडे। सर्वाधिक रन जोड्न खेलाडीको तेस्रो नम्बरमा रहेका उनले २ अर्धशतक हिर्काएका थिए। सर्वाधिक रन जोड्न खेलाडीको दोस्रो नम्बरमा एपिएफका प्रदीप ऐरी रहे। उनले २१३ रन जोडे।
लुम्बिनीका अनिल खरेल उत्कृष्ट बलर घोषित भए। उनले ४ इनिङ्ग्समा १० विकेट लिएका थिए। सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको सूचीमा उनी तेस्रो स्थानमा थिए। शीर्ष स्थानमा रहेका पुलिसका दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ६ खेलमा १४ विकेट र दोस्रो स्थानमा रहेका एपिएफका अभिनास बोहराले १२ विकेट लिएका थिए।
सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा रहेका दीपेन्द्र सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको सूचीमा चौथो स्थानमा थिए। उनले र तेस्रो स्थानमा रहेका देव खनालले समान १५८-१५८ रन जोडेका थिए। तर दुई अर्धशतक प्रहार गरेका दीपेन्द्रले कुनै पुरस्कार पाएनन्।
सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका आसिफले ३० हजार पाउँदा कुशल र अनिलले २०-२० हजार पाए।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ५, २०७८, ०३:२३:००
आयोजना अनुमति नपाएपछि इपिएलद्वारा क्यानविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर
लखनउलाई हराउँदै बैंग्लोर क्वालिफायरमा, राजस्थानसँग भिड्ने
एभरेस्ट प्रिमियर लिगको 'धम्कीमा' क्यानको आपत्ति